विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने राजपा सांसदको सेवा सुविधा खोसियो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने राजपा सांसदको सेवा सुविधा खोसियो
अशोज २९ गते, २०७६ - १३:०६
काठमाडौं । विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद प्रमोदकुमार साहले सांसद पदको हैसियतमा पाउने सेवा, सुविधा तथा अधिकार नपाउने भएका छन् । संसद सचिवालयले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरि साहले प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा पाउँदै गरेको अधिकार, सेवा तथा सुविधा नपाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि सोही नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम (२) बमोजिम संसद सचिवालयले साहको विषयमा निर्णय गरेको संसद सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन् । गौतमका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले कारबाही प्रक्रियाको लागि पक्राउ गरेकोले साहमाथि संसद नियमावली अनुसार कारबाही गरिएको जनाए ।
सांसद साहले गत सोमबार जनकपुर विमास्थलमा बुद्ध एयरको जहाज जहाज डिले भएको भन्दै काउन्टर तोडफोड गरेका थिए । उनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट खटिएको प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरि मंगलबार नै धनुषा जिल्ला प्रहरीमा उपस्थित गराएको छ ।
राजपा सांसद साह सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
यस्ताे छ संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेकाे सूचना
अशोज २९ गते, २०७६ - १३:०६ मा प्रकाशित